TOP madhiri evhiki paAmazon - June 2017 | Gadget nhau
TOP madhiri evhiki paAmazon - June 2017
Isu tiri geeks, tinoda tekinoroji uye nekudaro zvemagetsi zvemutengi. Ndokusaka isu tichigara takangwarira kune chero rudzi rwekupihwa kwekufarira kunogona kumuka zuva nezuva. Nekudaro, isu takave neruzivo rwuri nani, tiri kuzokuunzira zvinopihwa vhiki nevhiki zvausingafanire kupotsa, nekuti iwe unenge uine zvemagetsi nemagadget zvemhando yepamusoro pamitengo isingakundike.
Kuti, gara nesu uye uwane kuti ndezvipi zvinonakidza zvinopihwa zvevhiki yekupedzisira yaJune (kubva munaJune 26 kusvika Chikunguru 3) uye tora mukana wekuchinja terevhizheni, uwane nharembozha nyowani ...
Iyi posvo ichagara ichigadziriswa zuva nezuva, saka tinokurudzira kuti udzoke kuzotarisa kuti chii chitsva chipo chezuva riri mubvunzo.
1 Amazon Deals (Chikumi 26-Chikunguru 3)
2 Maeuro mashanu echipo muAmazon vachitenga mavhoketi echipo
Amazon Deals (Chikumi 26-Chikunguru 3)
Tora zvipo zvakakosha pa150 euros nekutenga zvigadzirwa zveCanon zvinosanganisirwa mune iyi sarudzo: EMAIL
LG 49 padiki TV (4K, IPS) ye € 766 ne kutumira mune rimwe zuva
Motorla moto g4 plusYakasarudzika Amazon edition yeiyo chete 179,99 € (mutengo wekare € 199,99, inopa inoshanda kusvika Chikumi 27).
JVC HA-EBTS in-nzeve mahedhifoni kubva ku € 29,90, iyo 38% dhisikaundi pamutengo wenguva dzose muna Chikumi 26.
32 inch LG Mutambo Wemitambo kubva € 368,18, ine dhisikaundi ye18% kusvika Chikunguru 2
Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa. kwe chete € 21,99, kuderera kwemutengo we45% kusvika Chikumi 26
Maeuro mashanu echipo muAmazon vachitenga mavhoketi echipo
Iyo inonakidza yeAmazon inopa yadzoka iyo yatichawana nayo € 5 sechipo patinotenga inokwana € 25 muma cheki zvipo. Unogona kuenda kunotora makadhi ako ezvipo mune zvinotevera EMAIL. Rangarira kuti ichi chinopihwa chichave chiripo kusvika Chikumi 30, saka hauzove nemazuva mazhinji ekushandisa icho. Iyo inonakidza uye imwe yeanotarisirwa nevashandisi veAmazon vanogara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » TOP madhiri evhiki paAmazon - June 2017
Araceli Guardia akadaro
Wow, iyo 49-inch LG ichave yangu! Ini ndoda maitiro 4K resolution anotaridzika zvakanyanya pane IPS pani
Pindura Araceli Guardia
akanaka sei woooo vanondishamisa
Pindura kuna alexander
Mafiripi mafoni ari vapenyu kupfuura nakare kose
Yakaburitsa ruzivo rwekutanga rweiyo Samsung Galaxy Note 8